Archive du 17-févr-2022
Savorovoron’ny governemanta Nandetika ankolaka an’i Imbiki ny PM
Naneho hevitra momba ny raharaha fialan’ny Minisitry ny fitsarana teo aloha Atoa Imbiki Herilaza ny Praiminisitra Ntsay Christian omaly,
Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka sisa ny ao anaty Fanjakana, fa ny ady efa miha mangotraka. Misy ny ady mangatsiaka goavana miotrika,
Fitsoahana an-tsokosoko an’i Gasikara Mpitsoa-ponenana 52 naverin’ny Kaomorianina
Mpitsoa-ponenana teratany Malagasy miisa 52 no naverin’ny manampahefana Kaomorianina aty Madagasikara, rehefa tratra tany amin’ny moron’i Mohéli ny fiandohan’ity volana febroary.
Tetikasa natao maimaika Miha sarotra ny fametrahana ny teleferika
Taorian’ny tombana nandritry ny fivorian’ny komity tekinika eo anivon’ny ofisim-pirenena momba ny tontolo iainana eto amintsika na ONE
Vidin-tsavony midangana Ny vahoaka hatrany no manentsina ny banga
Midangana izay tsy izy ny vidin’ny savony amin’izao, ary tena nisongadina io nanomboka ny fiandohan’ny febroary. Milaza ireo orinasa mpamokatra savony fa noho ny fiakaran’ny tataon-ketra na “droit de douanes”
Ben'ny tanànan'Ampitatafika « Sarimihetsika mampidi-doza no ataon-dRaholdina »
Manoloana ny fiampangana an-gazety sy haino aman-ery nataon'ny Depiote Naivo Raholdina ny Ben'ny Tanànan'Ampitatafika ho niray tsikombakomba tamin'ny fikasana hamono azy,
Olona manodidina an-dRajoelina Tena mbola manohana azy 100% ve ?
Hafahafa ny rivotra mitsoaka ao anaty Fanjakana. Matoa tonga tamin’ny fialana sy fanesorana minisitra, dia efa tsy mitoetra intsony izany ny firaisan-kianan’ny governemanta.
Fidorohana zava-mahadomelina Roalahy indray no tratra teny Volosarika Ambanidia
Lehilahy miisa roa 18 sy 20 taona ny no nosamborin’ny polisy omaly 16 Febroary rehefa avy nidoroka zava-mahadomelina.
Fifamoivoizana Ho avy indray ny fanasaziana ny fiara “vitres fumées”
Nohamafisina fa tsy azo ampiasaina ary raràna mafy manerana ny Nosy ny fampiasana ny fiara matroka fitaratra na “vitres fumées” na “non tranparentes”
Tontolon’ny fitsaboana Tonga mijery akaiky ny CVO+ ny iraky ny OMS
Eto Madagasikara nanomboka ny 14 febroary ny iraka avy amin’ny Rafitra iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na OMS,
Fanovana governemanta Andrasana aorian’ny fiverenan’ny Filoha
Any amin’ny fivoriana iraisampirenena any Eoropa moa amin’izao fotoana izao ny filoham-pirenena Malagasy, Andry Rajoelina.
Fetison Andrianirina “Manao izay tsy itiavana azy ny Fitondrana”
“Manao izay tsy itiavana azy mihitsy kosa izao fitondrana izao, raha ny fahitana azy. Aiza ve koa efa mpivady no mitantana ny CENI sy Ministeran'ny Asam-panjakana no mbola homena azy ireo koa ny Fitsarana?
Kaominina Alasora Nahazo birao vaovao ny borigadin’ny zandary
Miroso amin’ny ady hatao amin’ny tsy fandriampahalemana mba hananan’ny mponina fiainana milamina ny eo anivon’ny kaominina Alasora, tarihin’ny Ben’ny tanàna Randriantsoa Jimmy.
Anjanahary Manao sesilany ny vaky trano
Maro ny fitarainan’ny mponina eny amin’iny faritra Anjanahary iny noho ny resaka vaky trano izay nanao sesilany tato ho ato.
Fanarenana taorian’ny rivodoza Nanome fanampiana mitentina 21 tapitrisa Ar ny QMM
Taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Batsirai izay nandravarava sy nampitondra takaitra ny faritra maro, nitondra fanampiana ho anjara biriky ho an’ny traboina ny orinasa Rio Tinto QMM.
Boriborintay faha-4 Noraofin’ny polisy ireo mpijorojoro amoron-dalana
Lehilahy miisa 11 no nosamborin’ny Polisy miasa ao amin’ny Boriborintany fahaefatra ny 15 febroary lasa teo tokony
Fatin’olona hita teny Ampasika Ahiana ho mpitondra moto voaendaka
Nahitana fatin’olona teny Ampasika omaly vao maraina. “Raha ny tazana dia manao kiraro, manao gant, manao blouson ary efa tapaka ny tanana havia”,
IHOSY Jiolahy efa nifonja tao Tsiafahy no maty voatifitra
Jiolahy iray 32 taona no lavon’ny balan’ny Polisy tao Ihosy ny 15 febroary atoandro teo tao amin’ny fokontany Tanambao rehefa nanao fanafihana mitam-piadiana.
Dumako tao Toamasina 420 ireo traboina raisina ao amin’ny EPP Analamboanio
Tafakatra 420 sahady ny isan'ireo olona avy ao amin'ny fokontany Antsiranampasika Toamasina voatery nafindra any amin'ny E. P. P Analamboanio omaly